Indlu yoMgcini-ntolongo * Lilonke ikhaya * Lilala 12
Olu jiko lwenkulungwane yekhaya, lubekwe kwidolophu ezolileyo nepholileyo yaseSpring City, luhleli phezu kwehektare.
Indlu yeJailer's Cottage ihlala ecaleni kwendlu yentolongo ye-rock eneminyaka eyi-165 ubudala (isesebubuchule).
Ngamagumbi okulala ama-4 abandakanya igumbi eliphezulu elineebhedi ezi-5, igumbi lokuhlala elipholileyo kunye nekhitshi elikhulu, eliphangaleleyo, eli khaya linendawo eninzi yosapho kunye nezihlobo ukuba banabe kwaye baphumle.
Indawo eninzi ngaphandle yokupaka, ukudlala imidlalo eyadini, kwaye ibandakanya indawo yokupaka i-RV, i-RV hookups kunye noqhagamshelo lwe-RV.
Incasa egqibeleleyo yekhaya (kunye nendlu kaMakhulu), le ndlu ikhethekileyo ye-128 yeminyaka ubudala i-2 blocks esuka kwi-Horseshoe canyon road, iibhloko ezi-3 ukusuka kwiMyuziyam ye-Old Schoolhouse, ipaki yeSixeko enebala lokudlala, umgodi omkhulu womlilo we-rotunda, i-lawn engapheliyo, a ibala le-baseball kunye neepaviliyoni ezigqunyiweyo. Kwaye ukutsiba nje, ukutsiba kunye nokutsiba ukusuka kwiNtaba iPleasant nelakwaEfrayim.
Izilwanyana zasendle ezimangalisayo zigcwele le ndawo imnandi kwaye zimbalwa izibane zesitrato onokubona iinkwenkwezi ngobusuku obuzolileyo. Ungaze ufune ukuhamba.
Ikhaya eligqibeleleyo lokuhlangana kosapho. Ibekwe kufutshane nazo zonke iziza zembali yasekhaya, phakathi kwe-Efrayimi kunye neMount Pleasant kwaye kuphela iimayile ezili-17 (imizuzu engama-20 yokuqhuba) ukuya kwiTempile entle nebukekayo yaseManti kunye neNduli yeTempile.
Le ndawo kunye nekhaya lilungele abazingeli. Imizuzu nje ukusuka kwezinye zezona ndawo zibalaseleyo zokuzingela kurhulumente.
Ababhali kunye namaGcisa akuthandile ukuhlala kwiCottage. IsiXeko saseSpring yidolophu ezolileyo nethe cwaka eneendawo ezininzi ezingaqhelekanga kunye nomtsalane.
IPalisades State Park yimizuzu engama-30 kuphela. Iintsapho kunye namaqela angonwabela izikhephe zokubhexa, ukubhexa okanye ukuloba kwichibi lasePalisades kunye nokudlala ipiknikhi elunxwemeni ngelixa abathanda igalufa bonwabele umjikelo kwiKhosi yeGalufa yasePalisades. Ezinye zezona ndawo zintle kakhulu kwi-County.
Ukuqhekeka kwamagumbi kunye nomthamo wokulala:
Igumbi likaSarah-zokulala 2 (uKumkanikazi)
Claire's Alfred Owl Room-Sleeps 2 (Kabini)
Oodade ababini abazifihlayo-Ubuthongo 3 (uKumkanikazi/Ongatshatanga)
I-Loft-Sleeps 5-7 (amawele ama-5-2 asonge abantu abaleleyo)
Igumbi lokuhlambela eli-1: Ngaphezu kweminyaka engama-60, iintsapho ezinkulu bezisebenzisa indlu yangaphandle kunye nebhafu yokuhlambela esele ikho. Ibhafu (epinki) yongezwa kwikhaya malunga no-1950 kwaye kwiminyaka embalwa kamva indlu yangasese kunye nesinki encinci yongezwa.
Namhlanje, sithatha kancinci amagumbi okuhlambela amakhulu kunye nabanzi okanye ngaphezulu kwegumbi elinye lokuhlambela ekhayeni, ezi yayiziindawo zobumnandi ezazingafumaneki lula ngelo xesha. Ngenye imini siya kwenza igumbi lokuhlambela elitofotofo kwiNkosana yethu ethandekayo, kude kube ngoko, uya kufumana amava ngendlela ebekuyiyo kule minyaka ingama-70 idlulileyo.
Iilinen zokulala kunye neetawuli zokuhlambela zibonelelwa kuzo zonke iindwendwe.
SILANDELE KWI-INSTAGRAM-Posa kwaye usithege @the.jailers.cottage
Le yingingqi ezolileyo nephangaleleyo. Abantu basekuhlaleni bamkela abahambi kwaye bayakuthanda ukuqhayisa ngedolophu yabo encinane.
Iindwendwe ziya kufumana i-imeyile eya kubandakanya ikhowudi yomnyango wokuzihlola. Siyafumaneka kuzo naziphi na iimfuno ezingxamisekileyo okanye imibuzo.